နေတိုးအဖွဲ့ဝင် လျှောက်ထားခြင်းက “အမှားတစ်ခု” ဖြစ်မည်ဟု ဖင်လန်သမ္မတနှင့်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုတွင် ပူတင်သတိပေး - Xinhua News Agency
မော်စကို/ဟယ်လ်ဆင်းကီး ၊ မေ ၁၅ ရက်(ဆင်ဟွာ)
ရုရှားနိုင်ငံသမ္မတဗလာတီမာပူတင်သည် ဖင်လန်နိုင်ငံသမ္မတ Sauli Niinisto နှင့် မေ ၁၄ ရက်တွင် ဖုန်းဆက်သွယ်ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး ဖင်လန်နိုင်ငံ၏ မြောက်အတ္တလန္တိတ်မဟာမိတ်စာချုပ်အဖွဲ့(နေတိုး) အဖွဲ့ထဲဝင်ရောက်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ပြောဆိုဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ဖင်လန်နိုင်ငံ(ဟယ်လ်ဆင်းကီး)ဘက်က အဆိုပြုချက်အရ ပြုလုပ်သော ဖုန်းဆက်ဆွေးနွေးမှုတွင် သမ္မတ Niinisto က လာမည့် ရက်အနည်းငယ်အတွင်း နေတိုး(NATO)အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မည့် ဖင်လန်နိုင်ငံ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်ပတ်သက်၍ ပူတင်အား အသိပေးပြောကြားခဲ့သည်ဟု ဖင်လန်နိုင်ငံသမ္မတရုံး၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်အရ သိရသည်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ရုရှားကရင်မလင်နန်းတော်ကလည်း ကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး “ ဖင်လန်နိုင်ငံရဲ့ လုံခြုံရေးကို ခြိမ်းခြောက်မှုမရှိဘဲနဲ့ စစ်ရေးကြားနေမှု အစဉ်အလာမူဝါဒကို စွန့်လွှတ်ဖယ်ရှားဖို့လုပ်ခြင်းဟာ ကြီးမားတဲ့ အမှားအယွင်းတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ ပူတင်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်” ဟု ထုတ်ပြန် ဖော်ပြခဲ့သည်။
ဖင်လန်နိုင်ငံက နေတိုးအဖွဲ့ထဲဝင်ရောက်ရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေမှုအပေါ် စိုးရိမ်ပူပန်ကြောင်း နှင့် ယင်းမှာ ရုရှား-ဖင်လန်ဆက်ဆံရေးအပေါ် အနုတ်လက္ခဏာသက်ရောက်မှုတစ်ခု ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ကြောင်း ပူတင်က ပြောကြားခဲ့သည်ဟု ကရင်မလင်နန်းတော်ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဆက်လက်ဖော်ပြထားသည်။
ယူကရိန်းအခြေအနေနှင့်ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးရာတွင် ပူတင်က ရုရှား နှင့် ယူကရိန်း ကိုယ်စားလှယ်များအကြား ဆွေးနွေးပွဲများသည် “ အမှန်တကယ် နှောင့်နှေးဆိုင်းငံ့ခဲ့ရတာကတော့ ယူကရိန်းဘက်က လေးလေးနက်နက်စိတ်ဝင်စားမှုနဲ့ အပြုသဘောဆောင်တဲ့ဆွေးနွေးမှုကို ထုတ်ဖော်ပြသခြင်းမရှိတဲ့ အတွက်ကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်” ဟု ပြောကြားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။(Xinhua)
MOSCOW/HELSINKI, May 14 (Xinhua) — Russian President Vladimir Putin and his Finnish counterpart, Sauli Niinisto, heldaphone conversation on Saturday and discussed Helsinki’s intention to join the North Atlantic Treaty Organization (NATO).
In the call initiated by Helsinki, Niinisto informed Putin of Finland’s decision to seek NATO membership in the next few days, according toapress release by the president’s office of Finland.
Meanwhile, the Kremlin said inastatement that “Putin stressed that abandoning the traditional policy of military neutrality would beamistake, since there are no threats to Finland’s security.”
Putin expressed concern that should Helsinki follow through with plans to join NATO, it may haveanegative impact on Russia-Finland relations, the statement said.
When discussing the situation in Ukraine, Putin said peace talks between Russian and Ukrainian representatives “were actually suspended by Kiev that does not show interest inaserious and constructive dialogue.”